Mareykanka: Dhimista Ciidankeenna Ma Saameyn Doonto Soomaaliya. – Goobjoog News
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa General Thomas D Waldhauser ayaa sheegay in qorshaha Mareykanku ku doonayo inuu dhimo ciidankiisa qaaradda jooga aysan saameyn ku yeelan doonin hawl-gallada lagula dagaallamayo argagixisada ku sugan waddamada Soomaaliya iyo Liibiya halkaasoo duqeymaha Mareykanku ku beegsado kooxahaas.
General Thomas D Waldhauser, oo sidoo kale ah madaxa taliska Mareykanka ee Africa ayaa ka dhawaajiyey in 300 oo askari la dhimi doono bisha June ee sannadka 2020 oo ah wajiga 1aad ee ciidan dhimista isagoo intaas ku daray inuusan hubin wajiga 2aad ee ciidan dhimista.
Wasaaradda Gashaandhigga ee Pentagonka ayaa ku baaqday dhimista ciidanka Mareykanka ee Africa qeybna ka ah qorsheyaasha dib diiradda loogu saarayo tartanka quwadaha waaweyn ee Ruusha iyo China lagula jiro.
Laakiin dhimista ciidamada ayaa dhalisay walaac ay ka muujiyeen xubnaha congresska Mareykanka kuwaasoo su’aal ka keenay inay arrintani keeni karto koror argagixiso oo qaaradda kasoo if-baxa.
Waldhauser ayaa u sheegay sharci-dejiyaasha in saraakiisha Mareykanku ay si hoose u eegayaan saameyn kasta oo suurtagal ah ee isbeddelkani keeni karo, isagoo ku celceliyey in dib loo dhigayo ciidan dhimis mustaqbalka ah haddii ay dhibaato noqoto wejigaan 1aad.
Qiyaastii ciidanka Mareykanka ee jooga qaaradda Africa ayaa lagu sheegay 6,000 oo askari iyadoo ciidankaas 4,000 oo ka mid ah ay ku sugan yihiin saldhigga Mareykanku ku leeyahay dalka Djibouti. Qiyaas ahaan ciidanka Mareykan ee jooga Soomaaliya waa 500 oo askari halkaasoo ciidanka Mareykanku ay kordhiyeen duqeynta xagga cirka ah ee lagu beegsanayo xarrakada Alshabaab oo xiriirka la leh ururka Alqaeda waana ururka hadda ka geysta gobolka qasaaraha ugu ba’an.
Horraantii sannadkan, Mareykanku waxay ku qaadeen Alshabaab 24 weerar oo xagga cirka ah—horey waxay Mareykanku u fuliyeen in ka badan kala bar weerarro xagga cirka ah sannadkii hore. Taliska Mareykanka ee Africa waxay sheegeen in duqeymaha Mareykanka ay ku qaadeen Alshabaab ay uga dileen 236 dagaalyahan. Waxaa Iyana jirta ku dhawaad 338 dagaalyahan oo la dilay 2018.
Kaydka Goobjoog Select Month October 2021 (134) September 2021 (194) August 2021 (169) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)